Kuwedzera Kwevatendi Kuvimbika: Mazano kubva kuSemalt
Bhizinesi rimwe nerimwe rinobatsira kubva kune vanowanzogadzira vatengi. Kune mabhizinesi e-inthanethi, e-commerce web site inotarisirwa pakudzokorora vatengesi kune webhusaiti yavo uye kuvashandura kuva vatengi chaivo. Nzira dzakawanda dzeshambadziro dzekutengesa dzinovimbisa kuwedzera kuonekwa kwewebsite yako kune chinangwa chako. Mimwe yemitemo iyi inosanganisira kubudiswa kwekugadzirwa kwezvinhu, hutano hwezvemagariro evanhu uye zvinonyanya kukosha, Search Engine Optimization (SEO). Zvisinei, maitiro ekugadzira zvinyorwa anotarisa pakuwana vatengi panzvimbo yako - best big baby beast coils. Kuchengetedza vatengi vako kunobva mune dzimwe mhando. Zviri nyore kuti mutengi wekare atenge pane kutora mutevedzeri mutsva. Kutarisa kwenguva yakawanda kwevashandi webhusaiti kwakawandisa. Iyi mamiriro ezvinhu zvinoreva kuti zviduku zvishoma kana kuti kukanganisa pawebsite yako zvinogona kuita kuti iwe urege kurasikirwa nevatengi vanokosha. Kuwana vashandi vako vekare kuti vanyatsove pedyo newe inotyisa.
The Semalt Mutevedzeri Mukuru weVatengi vanobudirira, Nik Chaykovskiy anopa ose e-commerce website kuti ashandise nzira dzinotevera kuchengetedza vatengi vavo:
1. Iva munhu akakodzera.
Imwe yenzira dzakanakisisa dzekudzidza zvakaitika kune imwe nzvimbo yewebhu ndeyokushandisa iwe pachako. Iyi nzira inovimbisa kuti iwe unoenda kuburikidza nechiitiko chakakwana mushanyi anonzwa paanoshandisa nzvimbo yako. Matambudziko aunotarisana nawo anoratidza zvakakwana zvechiitiko chokutenga. Izvi zvinogona kukukurudzira iwe kugadzirisa kudikanwa kwewebhu web design yako zvakadai sezvenhengo dzakaputsika, zvisiri izvo zvekugadzira zvinhu uye zvikamu mune imwe nyaya; munhu anokwanisa kuona zvikanganiso mu SEO sangano rakadai sedhipatimendi.
Imwe yekare nzira yekutsvaga kutaurirana zvakananga nevatengi. Vatengesi vanoshandisa nzira iyi, uye inoramba ichiunza tonnes yemigwagwa kune mawebsite. Zuva nezuva zuva rinoshanya rinogona kubatsira bhizimusi rako rebhizimisi rakachengeteka kwenguva yakareba uye vatinonyorera. Kuungana pamwe chete nemutengi kunounza chinzvimbo chekuvimbika pamwe nekuwedzera kubhidzira kwebhizimisi rako. Somugumisiro, unowana vanhu chaivo vanogona kukuvadza vamwe vanhu kutenga yako webhusaiti. Uyezve, iyi nzira inounza hunodikanwa hwehupenyu hwehupenyu hunopupurirwa, zvichiita kuti urongwa hwako hwekutengesera hubudirire.
3. Haisi iwe.
Chikanganiso chimwechete va blogger vanoita kuumba mawebsite avo pamusoro pavo. Chero mamiriro ezvinhu, izvi zvose pamusoro pevateereri vako. Kuti ibhizimisi richengetedze vatengi varo, kune chido chekunyorera zvakanakisisa uye zvakakodzerwa. Somugumisiro, iwe unowana kuverenga kwakagadzikana kwehutano pamwe nekugara kwakasimba kwevatengi vatsva. Mune zvimwe zviitiko, maitiro eSeO sekutumira mameseji ega ega anoenda nenzira yakareba mukuita kuti vateereri vanzwe kuti ndezvavo. Nokudaro, yeuka kuita kuti vateereri vako vanzwe kuva wega niche. Somugumisiro, pfungwa iyo yekuita inobereka kuvimbika.
Zvose e-commerce web site inoda rubatsiro rwevanhu kuti ruzive ruzivo rwakakosha pakugadzirisa kwayo. Nokudaro, munhu anotumira zvinyorwa paIndaneti anofanirwa kutenga mari yakawanda yekuchengeta vatengi vavo. Kuita kuti vatengi vabatanidze nechisarudzo chako ibasa rakaoma. Kuvimbika kwevatengi kunogona kuva chinhu chinokosha kune rimwe bhizinesi. Iri gwaro rinogadzirira e-commerce website yako uye maitiro eSEO ekutsvaga kuchengetedza vanogona kuti vatengi vaswedere. Iwe unogona kukwanisazve kuwana chivimbo chevako vekare-vatengi pamwe chete nekuita vatengi vatsva zvakare.